Guridda guridda ee 2018 waxaa lagu gartaa cimilo diiran. Sanka khamrigan cad wuxuu bixiyaa qoraalo shaah, oo ay weheliso dhadhan macaan oo ah vanilj jilicsan iyo dareemo subag oo si tartiib tartiib ah ugu gudbaya tilmaamaha miraha kulaylaha.
Castello della Sala waa khamri Talyaani ah oo ka mid ah guryo dhowr ah oo uu leeyahay soo saaraha weyn ee khamriga Marchesi Antinori. Khamriga iyo beeraha canabka ah waxay ku yaalliin Umbria, u dhow soohdinta Tuscany oo u dhow magaalada Orvieto gudaha Orvieto Classico dhawaaqid. Waxaa caan ku ah khamriga cad cad noocyada gobolka sida Grechetto iyo Procanico (Trebbiano) iyo waliba noocyo caalami ah Chardonnay iyo Sauvignon Blanc.
Khamriga waxaa loogu magac daray qalcaddii qarniyadii 14aad qarniyadii dhexe. Waxaa loo dhisay 1350 sidii dhufeys difaac ah inta lagu gudajiray iskahorimaadyada gobolka ee hareeraha magaalada Orvieto laakiin, inkasta oo ay taariikh dheer leedahay, garoonku ma uusan soo saarin khamri ganacsi ilaa Qarnigii 20aad.
1940 waxaa iibsaday Marquis Niccolò Antinori, oo lahayd guryo dhowr ah iyo guryo khamri ah gaar ahaan agagaarka Tuscany. Hantida ayaa ugu dambeyntii lagu beeray noocyo cad si loo ballaariyo khamriga cas ee la aasaasay dalladda Marchesi Antinori. Qasrigii waa la dayactiray isla waqtigaas halka beeraha canabka ah ay ku tijaabeen abuurka Grechetto iyo Chardonnay. Sannadkii 1985-kii ayaa la dhammaystiray maqaasiin cusub iyo tas-hiilaad-sameeyeyaasha oo ay ku jireen markaas-oo ah farshaxan, heerkul-xakamaysan taangiyada halsano.
Dhismuhu wuxuu ku fadhiyaa 500 hektar (1240 acres) oo leh 140ha geedka canabka ah hoostiisa inta udhaxeysa 650 iyo 1480 feet. Castello della Sala wuxuu leeyahay sumcad labadaba khamriga loo yaqaan 'Orvieto Classico-loogu talagalay', oo ka kooban noocyo dhaqameed, iyo sidoo kale IGT khamri ka Chardonnay, Sauvignon Blanc iyo Noot Pin iyo kuwo kale. Hantida sidoo kale waxay ka sameysaa saliid saytuun ah geedka saytuunka ah ee 8ha.